Bixin: Android 5.0 Update hurdiga ah ama rakib
Sug wakhti dheer dhawrayeen oo ugu dambeyntii waa avaiable - Android 5.0 hurdiga ah. Sida ii, dad badan oo aan la sugi karin u ah inay tijaabiso dhadhan ee Android hurdiga ah. In article kale, Waxaan soo bandhigay sida loo rakibi Android 5.0 hurdiga ah ee telefoonka ah Android ama kiniin. Si kastaba ha ahaatee, waa artile daahir ah kuna saabsan gelinta Android L, ma waxaa ka mid ah siyaabaha wax looga qabto dhibaatooyinka halka installting Android 5.0 iyo jawaabo su'aasha users 'la xiriira Android 5.0 update. Taasi 2 sababaha ugu muhiimsan qodobkan loo abuuray. Hubi jawaabaha aad dooneyso in aad ogaato oo ku saabsan 5.0 update hurdiga ah.
# 1. "Waxaan ogaaday in dad badan oo ka hadleynaa waa la xariirta in Android 5.0 hurdiga ah. Laakiin markii aan hubiyaa aan Nexus 4, waxaa jira update ikhtiyaarka lahayn oo dhan".
Android 5.0 hurdiga ah aan la heli karin, waayo, dhammaan taleefanada Android iyo kiniiniyada hadda. Moto X Edition daahir ah iyo labaad-g Moto G yihiin qalabka hore si aad u hesho update Android Ota hurdiga ah ee ka Moto rasmi ah. Iyo taxane Google Nexus waa qalab labaad si aad u hesho Ota ah. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan ma telefoonada Nexus iyo kiniiniyada ka heli kartaa update ee hadda. Hurdiga ah Android 5.0 image warshad waa avaible u Nexus 10, Nexus 9 (Wi-Fi), Nexus 7 (Wi-Fi iyo Mobile), Nexus 5 (GSM / LTE). Waxaad fiirin kartaa goobta offcial Google si ay u xaqiijin. Sida Nexus 4, waa in aad siiyo waqti qaar ka mid ah Google si ay u soo rogo.
# 2. "Waxaan isha ku webpage Google image warshad u hayaa, image warshad ee Android 5.0 waa availe inaad kala soo baxdo u Nexus 5. Si kastaba ha ahaatee, waxaan helin macluumaadka update on my Nexus 5 weli."
Dad badan ayaa waxay sheegeen inay aanan helin update weli in kastoo ay arkeen file warshad image waa download rasmi Google. Xaqiiqdu waxay tahay in qaar ka mid ah Ota for update ayaa loo dhigi karaa. Haddii aadan sugi karin, waxaa ka, file warshad image ka ​​soo bixi oo ku xidh on qalab aad manully adigoo raacaya hage .
# 3. "Haddii aan kala soo bixi image warshada oo ku xidh on my Nexus 7 manualy, waan masixi doono dhammaan macluumaadka ku saabsan qalab wixii ii baxay?"
Haa, taasi waa jidkii sida ay u shaqayso. Xaaladdan oo kale, waxaan soo jeedinaynaa inaad sugto ka update Ota oo rasmi ah oo ku saabsan Nexus 7. Ku xiridda Android hurdiga ah 5 via Ota marnaba masixi xogta oo dhan.
# 4. "Android doonaa 5.0 lagu rakibay on Fiiro aan Galaxy 2. Waxaan ahay is Umaleyn maayo, laakiin waxaan arkay in dad badan oo uu sheegay in laga yaabee Samsung dhigo qaar ay heli doonaan."
Up ilaa hadda, kaliya waxaan maqlay in Samsung qorshaha 5.0 Android ka hurdiga ah ee Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 4, Galaxy Alpha, iyo Fiiro Galaxy 3. Waa pitty ah in Galaxy Note 2 ma aha in liiska.
# 5. "Ma waxaa jira hadalka rasmi ah oo ku saabsan sababta images warshad waxaa dib u Nexus 7 LTE (2013)? Waxaan u qaadan waa sidaas Verizon ogolaan karno update, laakiin kaliya haddii cajiib ah in mar uun la sheegay by Google."
Waxaan qabaa in aad u baahan tahay in la siiyo Google mararka qaar in ay sii daayaan update ee Nexus 7 LTE (2013). Just samir.
# 6. "Waayo, kuwa ku qotoma oo booloader quful (kicisaa gacanta) waxaa muddo dheer ilaa uu qof la Timaadda hab u iftiimiyo this ee soo kabashada iyo caado u badan tahay ikhtiyaar ah u iftiimiyo ah rujin 5.0 sidoo kale ma noqon doonto. Anigaa i sax ah?"
Waxaan ku heshiin karin in ka badan. By rakibidda Android 5.0 gacanta ku saabsan doono qalabka Android hubaal badiyay aad xididka. Qof soo duuli doonaa xal.
> Resource > Android > Android 5.0 Dhibaatooyinka hurdiga ah Update